Yakachipa Sheet simbi zvikamu polishing zvikamu fekitori uye vatengesi | Ouzhan
Sheet simbi mativi anosanganisira makorari uye pakuonekwa. Makorari anoshandisa kukweshera midhiya senge sandpaper, pumice, uye poda yakaisvonaka yemabwe kukwiza pamusoro pechinhu chakafukidzwa kana kupfeka firimu. Kukwenenzvera kunoshandisa zvemakanika, zvemakemikari kana zvemagetsi kukonzeresa kumeso kweiyo workpiece kuwana kupenya. Iyo yekugadzirisa nzira yefati pamusoro.
Yakasarudzika jira simbi kukwenya uye kukuya zvikamu-kunyatsoita sheet simbi kupora uye kukuya kugadzira michini zvikamu
Sheet simbi zvikamu zvigadzirwa zvinogadziriswa ne sheet sheet technology. Hatigone kuita tisina machira esimbi kwese kwese muhupenyu hwedu. Sheet simbi zvikamu zviri kuburikidza nefilament simba ichitenderera, laser kucheka, inorema kugadzira, simbi kubatana, simbi yekudhirowa, plasma kucheka, uye nemazvo kutema. Isa rwakapetwa Anoumba, jira simbi vachikotama Anoumba, kufa nokuchengetedza, mvura jeti nokuveza, zvakarurama nomoto. Sheet simbi inotsanangurwa se: jira simbi ndeye yakazara inotonhora yekushanda mashandiro esimbi machira (kazhinji ari pazasi pe6mm), kusanganisira kuveura, kubaya / kucheka / kuumbiridza, kupeta, kupisa, riveting, kupwanya, uye kugadzira (senge mota dzemotokari). Chinhu chayo chinozivikanwa ndeyehuremu hweyunifomu yechimwe chikamu. Sheet simbi zvigadzirwa zvine hunhu hwehuremu huremu, simba rakakwira, magetsi conduction, yakaderera mutengo, uye yakanaka kuwanda kugadzirwa kuita. Ivo vane akasiyana siyana ekushandisa.
Sheet simbi kugadzira kwave kushandiswa zvakanyanya muminda yemagetsi, kutaurirana, mota indasitiri, uye zvekurapa zvekushandisa. Semuenzaniso, mumakesi kesi, nharembozha, uye MP3, sheet sheet chikamu chakakosha. Uye zvakare, inoshandiswa mukugadzira michina yezvokurapa, uye inoshandiswa zvakare mumotokari nemotokari (matori) miviri, ndege fuselages nemapapiro, matafura ekurapa, kuvaka matenga (kuvaka) uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa.
Zvakanakira Shanghai Ouzhan jira simbi pakuonekwa uye pakuonekwa michina zvikamu
Yakasarudzika jira simbi polishing muchina zvikamu
Maitiro makuru Sheet simbi makorari uye kukuya
Pashure: Sheet simbi zvikamu kupora
Zvadaro: Sheet simbi zvikamu kutsika